Ockel Sirius A Pro, enwekwu ike maka akpa a miniPC | Akụkọ akụrụngwa
Ruben gallardo | | Kọmputa
Ọ bụ eziokwu na anyị na-ekwukarị mobiles ọgbara ọhụụ dịka kọmpụta dị ike. Kpachara anya, na akụkụ ya ọ bụ eziokwu: na ha anyị na-eme ihe niile ma anyị na-arụ ọrụ - na-ekwu okwu na usoro ọkachamara. Agbanyeghị, enwere oru nke amụrụ n'afọ gara aga 2016 na Indiegogo. Ọ bụ ihe Ockel Sirius A, a obere kọmputa na a 6-anụ ọhịa ihuenyo na Windows 10 gbabara n'ime.
Otú ọ dị, site n'otu ikpo okwu crowdfunding agbakwunyere ohuru, nke kariri ike: Ockel Sirius A Pro. Ihe nlereanya a nwere otu nhazi na arụ ọrụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ nkọwa ya dị ike karịa ụdị ọkọlọtọ.
The Ockel Sirius A Pro bụ obere kọmputa nke ga-adaba na akpa nke jaket gị, uwe ogologo ọkpa gị ma ọ bụ ebe ọ bụla ịchọrọ. Ọ nwere 6-anụ ọhịa zuru ihuenyo mmetụ na-agba ọsọ Windows 10 Pro - standardkpụrụ nke ọkọlọtọ nwere arụnyere Windows 10 Home version.
The Ockel Sirius A Pro nwere otu nhazi ahụ dị ka ụdị nke egosiri na 2016; nke ahu bu, o nwere Intel Atom x7-Z8750 4-isi usoro, nke na nke a ga-esonyere ya na a 8GB Ram jiri ya tụnyere 4 GB nke ụdị ọkọlọtọ. N'otu aka ahụ, ohere nchekwa ahụ abawanyela ma anyị si na 64 GB gaa 128 GB. N'ezie, anyị ga-anọgide na-enwe oghere microSD dakọtara na kaadị ruo ihe ruru 128 GB karịa.
Ndị a bụ ndịiche ndị dị n'etiti ọkọlọtọ ọkọlọtọ na ụdị Pro: Versiondị OS; ego RAM na ọnụọgụ nke oghere dị n'ime iji chekwaa ozi. Maka ndị ọzọ, anyị ga-anọgide na-enwe ọdụ ụgbọ Ethernet, ọdụ ụgbọ mmiri USB 3.0 abụọ, ọdụ USB-C; ihe mmepụta HDMI; ihe batrị 3.500 mAh, yana njikọ WiFi ac na Bluetooth 4.2.
El Ockel Sirius A Pro ka dị site ụgwọ ọrụ - Ọnụ ego dị ọnụ ala karịa ka a na-ere ere. A na-atụ anya izizi izizi izipu ọnwa Jenụwarị 2018 na ọnụ ahịa ha ga-ebido na dollar 650 (euro 545 na mgbanwe)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Ockel Sirius A Pro, ike ọzọ maka akpa a miniPC